Su'aalaha La Weydiiyo - Taian Common Rail Industry & Trading Co., Ltd.
1. Immisa shaqaale ayaad ku leedahay waaxdaada R&D? Shahaadooyin noocee ah ayey leeyihiin?
Waxaa jira 10 shaqaale ah oo ka tirsan waaxda R&D dhammaantoodna waxay leeyihiin khibrad shaqo oo caalami ah.
2. Miyaad awood u leedahay inaad ku hagaajiso badeecada LOGO macaamilka?
Haa, waxaan ku sameyn karnaa qaabeyn ogolaansho.
3. Miyaad kala saari kartaa wax soo saarkaaga iyo kuwa kale?
Haa, waan awoodnaa.
4. Maxaa qorshe ah oo aad ka leedahay alaabtaada cusub?
Waxaan u sii deynnaa alaabteenna cusub iyadoo loo eegayo baahida suuqa iyo horumarka duurkayaga.
5. Maxay ku kala duwan yihiin alaabtaada iyo kuwa kale ee kula tartamaya?
Waxaan ku adkeysaneynaa xakamaynta tayada, tayada iyo waxqabadka ugu fiican, adeegga ugu fiican, iyo isticmaalka tamarta ugu hooseeya.
6. Waa maxay mabda'a naqshadeynta jirka? Waa maxay faa'iidooyinka?
Waxaa lagu sameeyay isbedelo caan ah iyo ergonomik. Waxay ku habboon yihiin macaamiisha inay isticmaalaan.
7. Waa maxay shahaadooyinka shirkaddaadu leedahay?
Waxaan ka gudubnay shahaadada CE.
8. Waa maxay nidaamka wax soo saar ee shirkaddaadu?
Waxaan la soconnaa amar-soo-saarid-tayo-baaris-baakad-dhoofinta-geedi socodka adeegga ka dib.
9. Waa maxay wadarta wax soo saarka shirkaddaadu?
Awooddeenu waa 300 cutub / sanadkii
10. Waa maxay cabirka shirkadaadu iyo qiimaha wax soo saar sanadle ah?
Waxaa jira shaqaale 50, aqoon-isweydaarsigeenna iyo dhismaha xafiiskeennu waxay ku fadhiyaan dhul ka badan 10,000 oo mitir laba jibbaaran. Qiimaha waxsoosaarka sanadlaha ah waa￥80 milyan.
11. Maxay yihiin hababka lacag bixinta ee shirkaddaada la aqbali karo?
Waxaan aqbalnaa wareejinta bangiga TT, Western Union, Paypal, gram money, iwm.
12. Ma leedahay sumad kuu gaar ah?
Haa, waxaynu leenahay naadir naaftada UD-united
13. Wadamadee iyo gobolkee alaabadaada loo dhoofiyey?
Waxaan u dhoofinay Ruushka, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Peru, Chile, Brazil, Colombia, Spain, Venezuela, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Croatia, Algeria, Argentina, Azerbaijan, Australia, Canada, Pakistan, India, Paraguay, Bulgaria, Bolivia, Germany, Togo, Ecuador, France, Philippines, Congo, South Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Cambodia, Zimbabwe, Kenya, Latvia, Romania, Madagascar, United States, United Kingdom, Mexico, South Africa, Senegal, Sudan, Turkey, Singapore, Iran, Zambia, iwm.
14. Waa maxay suuqaaga ugu weyn?
Waxaan u iibineynaa dukaamada magdhawga gudaha iyo shirkadaha ganacsiga, waxaan sidoo kale si toos ah ugu dhoofineynaa suuqa caalamiga ah ee dayactirka mashiinka naaftada iyo qaybaha dayactirka.
15. Shirkadaadu ma ka qayb gashaa bandhigyada? Maxay yihiin waxyaabaha gaarka ah?
Waxaan kaqaybqaadano sanadkasta, tusaale ahaan, Ruushka Carwada Qaybaha Gawaarida, Turkiga Carwada Qaybaha Gawaarida, Frankfurt Qaybaha Gawaarida Gawaarida, Bandhigyada Qaybaha Gawaarida ee Beijing, Canton Fair, iwm.
16. Maxay ahaayeen iibinta shirkaddaadu sanadkii la soo dhaafay? Waa maxay saamiga iibka gudaha iyo iibka shisheeye? Muxuu yahay bartilmaameedkaaga sanadkaan? Sidee lagu gaaraa?
Iibkii sanadkii hore wuxuu ahaa 80 milyan yuan, 40% gudaha iyo 60% suuq caalami ah.
Bartilmaameedka iibka sanadkan waa 90 milyan yuan. Waxaan sii deyn doonnaa alaabooyin cusub, waxaan weyneyneynaa tiradeyada. Waxaa jiri doona dallacsiin dheeri ah sanadkan, waxaanan isku dayi doonaa inaan horumarino macaamiil cusub oo khadka tooska ah iyo khad la'aanta ah, dhanka kale, waxaan heli doonaa iibiyayaal cusub oo ku soo biira kooxdayada sidoo kale.